वर्ल्डलिङ्कको अफरः १ महिनाको इन्टरनेट प्याकेजमै २४ हजार पर्ने ३२ इञ्च टेलिभिजन र नेट टीभी ! « TechPana | Digging into Tech
शुक्रबार, कार्तिक २२, २०७६ १३:५३
जुन महिनाको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा स्पेनको भ्यालेन्सियामा कोरोना केस शून्यमा झरेको थियो । स्पेन लगायत
तपाईंले सोचेभन्दा धेरै डेटा संकलन गर्छ गूगल, हेर्ने, मेटाउने अनि रोक्ने कसरी ?
काठमाडौं । गूगलले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा तपाईंले सोचेभन्दा धेरै संकलन गर्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा
काठमाडौं । फाइभजी भनेकै तिब्र गतिको इन्टरनेट स्पीड हो । पछिल्लो पुस्ताको यो वायरलेस प्रविधिले